Noocyada quartz: sifooyinka, asalka iyo sameynta | Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 12/10/2021 10:00 | Geology
Quartz waa macdanta ugu badan ee qolofka dhulka, waxaa lagu gartaa noocyo, noocyo iyo midabbo kala duwan, taas oo ka dhigaysa mid aad u soo jiidasho iyo qiimo badan. Sababtoo ah kala duwanaansho badan iyo kala duwanaansho, waxay leedahay codsiyo kala duwan. Way kala duwan yihiin noocyada quartz waxayna leeyihiin adeegsiyo kala duwan oo ku xiran midabka iyo halabuurka ay leeyihiin.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa maqaalkan inaan kuu sheegno waa maxay noocyada kala duwan ee quartz ee adduunka ka jira iyo astaamaha ugu waaweyn ee ay leeyihiin.
2 Astaamaha noocyada quartz
3 Noocyada quartz
3.2 Cryptocrystalline ama microcrystalline
4 Asalka iyo sameynta dhagaxyada
Quartz waxay ka kooban tahay hal qayb oo silica jel ah iyo laba qaybood oo oksijiin ah. Sababtoo ah halabuurkooda, aad bay u adkaysi u leeyihiin waxayna leeyihiin astaamo ka dhigaya macdantaan inay noqoto qayb ku habboon aaladaha sida saacadaha ama aaladaha gudbinta soo noqnoqoshada raadiyaha. Dhagaxyadaan ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inay leeyihiin bogsasho, ilaalin, iyo awood-xakamaynta tamarta. Xadaaradihii hore sida Masaaridii, Aztec -ka iyo Roomaanku waxay u adeegsan jireen dahabka iyo faashadaha maxaa yeelay waxay aaminsanaayeen inay leedahay awood ay ku bogsiiso jirka iyo maskaxda ayna iska caabiso tamarta taban.
Quartz wuxuu u muuqdaa meel kasta oo adduunka ah wuxuuna ku yimaadaa midabbo kala duwan. Waxay u dhexeeyaan hufnaan ilaa gabi ahaanba daal, mid walbana waxaa loo tixgeliyaa inuu leeyahay macne kale.
Marka loo eego halabuurka, waxaa jira noocyo kala duwan oo quartz ah, in kasta oo kuwa ugu caansan yihiin amethyst, citrine iyo quartz caano, kuwaas oo lagu tixgeliyo gemology. Maxaa ka sii badan, Waxaa jira noocyo ka mid ah quartz oo loo tixgeliyo dhagaxa dhagaxa ah in kasta oo qiimahoodu aad u hooseeyo. Guud ahaan, kuwani waxay u kala baxaan sida ay u kala duwan yihiin crystallites, taas oo ah, midabkooda. Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan waa:
Quartz cad oo caano leh, ka muuqato ama ku dhow daallan.
Muraayadda qiiqa leh, codadka hufan iyo cawlan.
Quartz Citrine, huruud ah ilaa oranji khafiif ah.
Amethyst, in ka badan ama ka yar midab guduudan.
Quartz Rose, sababtoo ah joogitaanka aluminium.
Astaamaha noocyada quartz
Waxaa ka mid ah astaamaha ugu caansan dhammaan noocyada quartz ee jira waxaan leenahay kuwan soo socda:
Dhalada Quartz waxaa iska leh fasalka silicates, gaar ahaan tectosilicates.
Halabuurka kiimikada saafiga ahi wuxuu u dhigmaa silicon dioxide (SiO2), oo ah hal qayb oo silikoon ah iyo laba qaybood oo oksijiin ah.
Waxaa lagu gartaa adkaanta Mohs ee 7.
Cufnaanta ama cufnaanta gaarka ah waxay aad ugu egtahay qiimaha celceliska qolofka dhulka, oo u dhexeeya 2,6 iyo 2,7 garaam halkii sentimitir cubic.
Waxay leedahay nidaam crystal ugu weyn u dhiganta nidaamka crystal lix geesood ah.
Iftiimintiisu aad bay ula mid tahay kiristaalada dhalada ah.
Midnimadeeda ama hufnaanteedu waa mid hufan ama hufan, si iftiinku si fudud uga gudbo muraayadda.
Ugu dambayntii, midabkeeda xarriiqa ah waa mid aan midab lahayn ama aan jirin.
Noocyada quartz waxay tilmaamayaan dhammaan noocyada quartz, farqiga kaliya ayaa ah in wasakhda ku jirta halabuurka kiimikada ee karisku ay kala duwan yihiin, laakiin halabuurka kiimikada asalka ah ee quartz (SiO2) ayaa weli ah. Kala duwanaanshaha isku -dhafka kiimikadaani wuxuu quartz siinayaa midabyo kala duwan.
Quartz-ka 'crystalline quartz' waa dhammaan noocyada quartz, waxay u muuqdaan sidii kiristaalo si wanaagsan loo habeeyay iyo walxo muuqda, taas oo ah, halkan waxaad si cad uga arki kartaa qaabka quartz-ka iyo dhammaan astaamihiisa.
Tusaalooyinka ugu badan ee kooxdan waa crystals quartz (kiristaalo dhagaxa ah), Qurub macdanta laga helo granite iyo sandstone, iyo quartz laga helo xididdada.
Cryptocrystalline ama microcrystalline
Kooxdan waxaa sameeyay macdanta quartz, kuwaas oo ka kooban kiristaalo quartz oo microscopic ah, taas oo ah, kiristaaladani ma muuqdaan isha qaawan, laakiin wada jir bay u sameeyaan nooc ka mid ah quartz microcrystalline. Kooxdan waxaa badanaa lagu magacaabaa chalcedony.
Asalka iyo sameynta dhagaxyada
Quartz waa macdanta ugu badan ee ku jirta qolofka dhulka, taas oo ah sababta loogu isticmaalay nidaamka kala soocidda dhagaxa dabka, dhagaxa dhagaxa ah iyo dhagaxa metamorphic -ka ah. Asalkeeda, soo -saaristeeda iyo samayskeedu waxay aad ugu xidhan tahay bay'ada juquraafi ahaan ee la xiriirta. Quartz-samayska dhagaxa ah ayaa laga helaa inuu ku dhex milmo tiro badan oo macdan ah noocyada kala duwan ee dhagaxyada, taasoo ka dhigaysa qayb ka mid ah halabuurka kiimikada macdanta iyo dhagaxa dhagaxa.
Dhagaxyada dabka leh, quartz waxay si qoto dheer u qallafsan tahay magma waxayna qayb ka tahay granite, diorite, granodiorite, iwm. Noocyada macdanta 'quartz crystallite' waxaa laga qarin karaa qaboojinta lama filaanka ah ee lava iyo qalabka pyroclastic, tusaale ahaan, quartz waa qayb ka mid ah rhyolite, pumice ama dacite. Ugu dambeyntii las rocas sedimentarias los granos de cuarzo van inuu ka yimaado kala-soocida, meteorización, erosión halkaas ayaa loo raray desde otro tipo de rocas hasta oo ku habboon nueva roca sedimentaria.
Quartz Hydrothermal waa nooc ka mid ah quartz crystallized ka silicon dioxide ee dareeraha hydrothermal, waxayna guud ahaan la xiriirtaa noocyo ka mid ah kaydka macdanta ama xididdada biyo -xidheenka ama kaydinta macdanta qaab xididdada. Qaar badan oo ka mid ah xididdada quartz -ka ayaa badanaa xiiso u leh sahaminta macdanta juqraafiga maxaa yeelay waxay ku jiri karaan biro xiiso leh sida dahab, lacag, iyo zinc.
Quartz Hydrothermal waa isku -darka magma oo ka kooban biyo iyo kiristaalo oo samaysma lava. Nidaamkani wuxuu ka soo jeedaa heerkul aad u sarreeya iyo cadaadis ka hooseeya dhulka dushiisa, biyuhuna waxay milmi karaan macdanaha kala duwan. Marka heerkulka magma hoos u dhaco, dareeraha haray waa quartz iyo biyo, xalkani wuxuu dhex maraa dildilaaca dhagaxa ku xeeran, meesha uu qaboojiyo oo uu bilaabo inuu si degdeg ah u adkeeyo.
Nidaamkani wuxuu sameyn karaa kiristaalo qurux badan oo quartz ah, iyo sidoo kale kiristaalo garnet, calcite, sphalerite, tourmaline, galena, pyrite, iyo xitaa lacag iyo dahab. Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu cad ee noocan ah waa amethyst, oo ah quartz microcrystalline guduudan. Midabku wuxuu noqon karaa mid aad u xoog badan ama ka yar, iyadoo ku xiran xaddiga birta (Fe + 3) ee ku jira. Tan waxaa lagu sameeyaa kala -goysyada xalka hodanka ku ah xabagta birta, heerkulka ka hooseeya 300 ° C, waxay muujin doonaan midab midab guduudan leh.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan uga baran karto noocyada quartz -ka iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Noocyada quartz